तपाईंको लागि सही काम फेला पार्नुहोस्(भाग 1) – Fnavi – 日本で働く世界の人のための総合情報サイト -エフナビ
जब विदेशीहरूले जापानमा बस्न खोज्छन् भने, त्यहाँ दुई प्रमुख बाधाहरू छन्, जसमध्ये एक जापानी हो, जुन मानिसहरू संग संचारको उपकरण हो। अर्को अझै पनि व्यापार, व्यवसाय हो।
यो समयबाट, म जापानमा काम गर्ने, कसरी जापानमा काम गर्ने र कसरी काम गर्ने जापानमा काम गर्न श्रृंखलाबद्ध गर्नेछु।
यो समय, म विदेशी परिवारको मामला परिचय गर्नेछु जुन परिवारको साथ जापानमा आइपुग्थ्यो र यो कारोबार सुरु गर्यो।
English・easy Japanese →　Find the right job for you in Japan (Part 1)
म जापानमा के गरिरहेको छु?
सबै मान्छे होइन, तर मलाई आश्चर्य छ कि म जापानमा कस्तो प्रकारको काम गर्नेछु, वा कुन पेशा गर्न चाहन्छु, तर म ती व्यक्तिहरूमा आउन सक्छु जुन आश्चर्यजनक कुरा होइन।
मीठा लुकेको छ। यो समय, नेपाली (दादा, पति र पत्नी, केटा) को एक परिवार एवरेस्ट क्री पसल खोलियो। यो ठाउँ हो जहाँ धेरै मानिसहरू राष्ट्रिय राजमार्गमा भीड हुन्छ।
तथापि, छ महिना पछि पनि, भीड अस्तुरै र संघर्ष जस्तो देखिन्छ।
एक दिन, दादाजीले शहरको हलको विदेशी सहयोग कार्यालयलाई सल्लाह दिए।
तथापि, यो केवल जापानी को सबै केहि बुझ्न सक्दैन। उनी सबै अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन्, र म नेपालका मेरो दादाको मूलपुरुष भाषा बुझ्दैनन्। वैसे पनि, सबैले दृश्यमा उड्यो। यो जहाँ सुधारको पाँच चरणहरू सुरु हुन्छ।
नेपाल मा एक करीरी पसल बाट पछाडि (चरण 1)
यो दिनको समयमा अँध्यारो छ, हैन? पर्खालको रङ कालो खैरो छ, र यो जापान हो। इशाराको वर्णनले नेपालका सबैजना यो भन्दै थिए।
कुनै पनि जापानी मेरो साथ नजिक छ।
त्यसोभए, मैले “भारतीय किताव पसल” पेश गरे जुन अर्को शहरमा भाग लिइरहेको छ, र तिनीहरूलाई भेट्न प्रोत्साहित गरियो। कुनै पनि कुराले तपाइँलाई त्यस्तो अवस्थामा कसरी भन्न सकिन्छ, यो जान सम्भव छैन। तपाईंको आफ्नै आँखाको साथ वास्तविक कुरा यो उत्तम छ। मालिकले अन्तिममा देखाएको देखिन्छ।
कोठाको रङ्गलाई उज्ज्वल गहिरो रङ्ग प्रणाली बनाइएको थियो, र प्रमाणको चमक दिइएको थियो, र बाहिरको लाइट दिन भित्र प्रवेश गर्न सुधारिएको थियो।
व्यंजनहरूको संख्या र स्वाद (चरण 2)
म त्यहाँ कतिजना मेनुमा अचम्म लाग्यो। त्यहाँ 100 प्रकार पनि थिए। स्वाद र नमस्कार गन्ध बलियो थियो। यो नम्बर 10 मेनु संख्या थियो, र गन्ध लिनको लागी इत्र को अतिरिक्त रोकियो। यसबाहेक, दिनको दौडान नजिकका वेतनशील कामदारहरूको लागि, मैले यसलाई तीन प्रकारको चावलको पालोमा बाँधेको थिएँ। अन्य शब्दहरूमा, मीठो र मसालेदार (बच्चा, बीउ, र पुरानो) को लागि मध्यम मध्यम (मानक जापान संस्करण), यो मसालेदार छ।
साँझमा, नेटालियन खानासँग मेनु निकै कम भयो, जुन स्थानीय डिश छैन।
यदि तपाइँ सबैलाई थाहा छैन भने, ग्राहकहरू आउँदैनन् (चरण 3)
मैले एक सानो उडान गरे र यसलाई वितरण गर्यो, तर मैले यसको सट्टा सरल साईनबोर्ड बनाएँ र यसलाई ठूलो क्यारेक्टरमा “भारतीय केश पसल” लाई सुधारियो।
“धन्यवाद” को एक शब्द (स्टेज 4)
“धन्यवाद” शब्द धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
हामी अनुहारमा कुरा गरौं र धीरज संवाद गरौं। यो एक-पक्षीय जापानीमा राम्रो छ।
मैले तिनलाई सोधेँ कि जापानी भाषामा दस शब्दहरू बोल्ने।
Sumimasen (माफ गर्नुहोस्)
न्यानिनिसिमसाका (तपाई के गर्न चाहानुहुन्छ)
Gmennasai (मलाई क्षमा गर्नुहोस्)
Wakarimasen (मलाई थाहा छैन)
Sayounara (गुड लक),
Sibarakuomatikudasai (कृपया केहि समयको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्)
Matakitekudasai (कृपया फेरि आउनुहोस्)।
जापानी सोसाइटीको लागि योगदान (स्टेज 5)
मालिकले हरेक बिहान सपिङ्ग जिल्लामा कचरा सफा गर्न पहल गरे। समय सबैले मालिकलाई भेट्न आए, यो “भारतीय केश पसल” दिनको समयमा धेरै लोकप्रिय भए। राति भाग धेरै समय लागु हुनेछ।
जापानमा बस्दा जब काम गर्दा कृषि, माछा र वानिकी, प्राथमिक उद्योग हो, धेरै छोटो हात हो।
यी उद्योगहरू सब्जीको पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, क्याम्प र पर्यटनसँग नजिक छन्।
He came to Japan from Finland with no purpose. Will...
Is itamistake by e-mail? Is thisacontract? (Par...
When working in Japan, be aware of unexpected pitfa...